Nin la Sheegay in uu Al-shabaab la Shaqaynayay oo Kenya Maxkamad lagu soo taagay – Radio Daljir
Nin la Sheegay in uu Al-shabaab la Shaqaynayay oo Kenya Maxkamad lagu soo taagay
Oktoobar 20, 2015 3:59 b 0
Talaado, Oktoobar 20, 2015 (Daljir) —Maxkamadda magaalladda Mombasa ee dalka Kenya waxaa shalay la soo taagay Nin Muslim ah, kaasi oo lagu eedeysayo inuu Alshabaab u qorayey Carruur iyo inuu 3 sanno ka hor dooxay Arday Kirishtaan ah oo uu la dhigan jirey Jamaacadda Maseno University.
Ninkaasi oo lagu magacaabo Saalim Maxamuud Wabwile oo aan lahayn wax Garyaqaan ah oo u dooda ayaa ka hor sheegay Maxkamadda Mombasa inuusan geli n dembiga ah inuu Carruurta dhigata Dugsiga Gandani Gotani Primary School ku tashkiiliyey inay ku biiraan Xarakadda Alshabaab Somalia.
Sarkaal ka tirsnaa Ciiddanka Ammaanka ee Jaamacadda Maseno University ayaa sheegay in Eedeysanaha uu ka baxsaday Jaamacadda, kadib, markii uu toorey ku dhuftay Arday kale taariikhdu markay ahayd 22-kii Feberaayo ee sannadkii 2012-kii.
Dhinaca kale, Garsooraha Maxkamadda Mombasa, waxa uu ku gacan-sayray in damiin lagu sii daayo Iimaamkaasi oo dhowr sanno ka hor soo Islaamay.
Maydka wiil Somali ah oo laga Helay kayn ku taala Australia